Fahad Yasin iyo Dr. Baadiyow oo ka shaqeynaya mideynta Islaax iyo Ictisaam - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Fahad Yasin iyo Dr. Baadiyow oo ka shaqeynaya mideynta Islaax iyo Ictisaam
Fahad Yasin iyo Dr. Baadiyow oo ka shaqeynaya mideynta Islaax iyo Ictisaam
Guddoomiyaha xarakada Islaax Dr. Cabdiraxman Baadiyow iyo Madaxa Arrimaha Dibadda ee xarakada Ictisaam Faha Yasin aya bilaabay madal lagu mideynaayo labada xarako. Dr. Baadiyo aya booqasho shan maalmood qaadatay ku tegay magaalada Dooxa ee dalka taasoo loogu raadinayo dhaqaalahii lagu qaban lahaa shir weyne ay isugu yimaadaan labada xarako ee Ictisaam & Islaax sida MOL loo xaqiijiyay.
Kooxda Ictisaam ayaa shirar gogol xaar ah ku qabtay magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi sanadkii la soo dhaafay waxaana labada xarako ka go’an in xukunka dalka uusan ka bixin gacanta kooxda Ictisaam iyadoo dhanka kale uu Dr Baadiyow isku arko in haddii ay dhacdo in Farmaajo uu socon waayo uu isaga noqdo musharaxa Fahad Yasin.
Shirka labada xarako aya lagu wadaa in uu ka dhaco magaalada Muqdisho dabayaaqada bisha Maarso ee sanadkan 2020.
Dowladnimada Soomaaliya aya waxaa tartan dheer ugu jira ururo islaami ah tan iyo markii xukunka uu iska casilay Madaxweynihii dowladda KMG ee lagu soo dhisay dalka Kenya Korneyl Cabdullaahi Yusuf Axmed (AUN).
Sanadkii 2009 ayaa waxaa talada dalka gacanta loo geliyay Sharif Sheekh Axmed oo ka yimid xarakada Al Sheekh oo ah farac ka tirsan kooxda Itixaad, waxaana afar sano kaddib xukunka dalka la wareegay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, Inkasto uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aanu ka mid ah ahayn ururada Islaamiga ah waxaa haddana ku hareereysnaa kooxda Damul Jadiid.
Doorashada soo socota ee lagu wado in ay dalka ka dhacdo ayaa waxaa barateenkeed ugu badan uu dhex mari doonaa ururada Islaamiyiinta ah musharaxiintooda waxaana ilaa hadda la ogyahay in ay musharaxiin yihiin.
Sharif Sheekh Axmed.
Soomaaliya ma heli doontaa musharax iyo hoggaan ka madax bannaan urur diimeed, maadaama hore loo soo tijaabiyay masuuliyiinta sokeeyaha u ah urur diimeedyada kuwaasoo aan u naxeyn dad iyo dal.
Previous articleWax ka ogow mowqifka Cirro ee kulankii Farmaajo iyo Biixi
Next articleSomali gov’t linked to murders, corruption and censorship of media freedom
(Faah Faahin) Qarax weyn oo ka dhacay lagana maqlay magaalada Muqdisho
Beecinta kursiga RW oo bilaabatay! “Musharaxiinta qaar oo sheegay in lacago “sooryo” ay siiyeen Mursal & Muudeey
Wararka Faysal Ali Axmed (Alteeso) - August 12, 2020
Waxaa goor dhow qarax weyn uu ka dhacay meel aan ka fogeyn agagaarka Wadada 21 October meel u dhow Suuqa Beerta ee degamda Waaberi,...
Beecinta kursiga RW oo bilaabatay! “Musharaxiinta qaar oo sheegay in lacago “sooryo” ay siiyeen...
Wararka Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - August 12, 2020
Ra’iisal Wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi oo xalay kulan gaar ah la qaatay Gudoomiye ku Xigeenka Koowaad ee baarlamaanka Cabdiwali Muudeey ayaa markii uu...
Wararka Sharmarke Xuseen - August 12, 2020
Waxaa la soo gabagabeeyay Shirka wasiiradda Maaliyadda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, shirkan oo labo cisho ka socday Hotelka Decale ee Garoonka...
Beecinta kursiga RW oo bilaabatay! “Musharaxiinta qaar oo sheegay in lacago...